Wararka Maanta: Axad, July 26, 2020-Barlamaanka Puntland oo laalay heshiiska ay ku xiran yihiin maxaabiista burcadbadeeda ee ku xiran xabsiga Garowe
Barlamaanku waxay laaleen heshiis udhexeeyay Puntland iyo jasiiradda Sycheles, kaasoo ku saabsanaa arimaha burcadbadeeda waxayna sidoo kale guddi u saareen sidii maxaabiista burcadbadeeda loosii dayn lahaa.
37 ayaa mudane ayaa codkooda ku taageeray in maxaabiista xabsiga lagasii daayo. Labo xildhibaan ayaa kasoo horjeestay, halka labo kalena ay ka aamuseen.
Maxaabiistaan ayaa lagasoo wareejiyay jasiiradda Sycheles halkaas oo lagu maxkamadeeyay, kadib sanado ay xirnaayeen waxaa loosoo wareejiyay Soomaaliya gaar ahaan Puntland si ay ixukunadooda ku dhameystaan.
Xildhibaanada oo maalmihii ugu dambeeyay ka doodayay xirnaanshaha maxaabiista ayaa u yeeray wasiirka cadaalada Puntland, xeer ilaaliyaha guud iyo dhammaan taliyayaasha ay qusayso arrintooda waxayna weydiiyeen sababta keentay in muddada intaas le’eg wax la iska weydiin waayo xirnaanshahooda.
Qaar kamid ah xildhibaanada ayaa ku dooday in magdhow lasiiyo maxaabiista burcadbadeedan, waxayna sheegeen inaan masuuliyad la iska saarin sharciyadda xirnaanshahooda lana marsiinin hay’addaha garsoorka iyo sharci dajinta.
Maxaabiista ayaa ku xidhan Puntland ayaa u badan kuwa kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug, waxaana socda qorshe ka dhaxeeya Galmudug iyo Puntland oo ah in maxaabiista Galmudug loo wareejiyo degaanadooda ama in lasii daayo